Chhaharaa | १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट
काठमाडौं । छसस । सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट जेठ १५ गते ल्याएको छ । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थ मन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ कूल रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने छ ।
त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारले राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर रकम खर्च गर्नेछ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५६ अर्ब बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट खर्च गर्ने छ ।
सरकारले चालु आ.व.मा रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा संघले गर्ने खर्च रु. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै आ.व. २०७७÷७८ मा कूल रु. १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसतर्फ राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । आ.व. २०७६÷७७ मा कूल रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ रु. ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु. ४ खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसमा राजस्वबाट रु. ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु. १ खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।
सरकारले आव २०७५÷७६ मा कूल रु. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आ.व.को बजेटमा चालुतर्फ रु. ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ रु. ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस आ.व.मा राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु. ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ रु. २ खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु. १ खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो ।
आ.व. २०७४÷७५ मा सरकारले रु. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसतर्फ रु. ८ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले राजस्वबाट रु. ७ खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट रु. १ खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट रु. एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको स्रोतको व्यवस्था गरिएको थियो ।